Nke a ọ bụ ihu kachasị njọ mgbanwe ihu igwe na-egosi anyị? | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị na-anụ na mgbasa ozi mgbasa ozi gbasara oke ihu igwe na ihe na-emebi emebi na-eme. N’izu gara aga, ajọ ifufe 5 nke na-agbawa obi Irma gafere agwaetiti Caribbean na Florida, na-ahapụ nnukwu idei mmiri, ọtụtụ ọnwụ na ọtụtụ nde ụlọ mebiri emebi na enweghị ike. Nke a hurricane abụwo ndị kasị ibu e dere na mmiri nke Atlantic Ocean.
Na mgbakwunye, ihe ịtụnanya ndị ọzọ dịka oke ọkọchị, idei mmiri n’ Italytali, oké ifufe nke ebe okpomọkụ, wdg. A na-abanye ya na-aga n'ihu. Ihe ndị a bụ mmetụta nke mgbanwe ihu igwe nke na-echere anyị n'ọdịnihu, na-arịwanye elu ma na-akawanye njọ. Nke a ọ bụ ihu ihu kachasị njọ nke mgbanwe ihu igwe?
Irma rutere mgbe Hurricane Harvey dị na ndịda United States na mbibi nke mmiri ozuzo eleghara anya na South Asia, nke ahụ egbuola ihe karịrị otu puku mmadụ na narị abụọ. Na nso nso, n’ Italytali, nnukwu mmiri ozuzo gburu ọtụtụ mmadụ. Ka ọ dị ugbu a, na mba anyị, anyị gụrụ akụkọ dịka "Spain nwere oke ọkọchị kacha njọ n'afọ 20 gara aga" ma ọ bụ "Osimiri Spanish nọ na 43% nke ikike ha ".
Ugbu a, ajọ ifufe ọzọ nke Atọ 1 (Hurricane Maria) ga-efe ọzọ na Caribbean Islands. Ajọ ifufe nke abụọ, José, na-arụkwa ọrụ na Atlantic ma kpalitekwa ịdọ aka ná ntị oké ifufe nke ebe okpomọkụ na ugwu ọwụwa anyanwụ United States.
Mgbanwe ihu igwe na-akpata ihe a nile? Ndị ọkà mmụta sayensị adọọla aka na ntị kemgbe ọtụtụ afọ na ikuku anwụ na-ekpo ọkụ nke ikuku ụwa na-ebute na-ebute mgbanwe na ihu igwe mbara ala nke mmetụta ya na oke ihu igwe na-aga n'ihu. Oke ike na oge ụkọ mmiri, idei mmiri, oké ifufe, ebe ifufe, wdg.
Ọ bụ ezie na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na mmetụta na-emebi ihe na ụmụ mmadụ doro anya, ọdịmma ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba na-aga n'ihu na-ebute n'ihu kama ịme ihe iji kwụsị ya.
Ekwesịrị ịkọwapụta na mgbanwe ihu igwe abụghị nke kpatara Hurricane Irma, ma ọ bụ Hurricane Harvey, Ma o meela ka ha sie ike ma mepụta ohere ka ukwuu maka ajọ ifufe ndị ọzọ.
Donald Trump, onye isi oche agọnarị onye kwụsịrị agha megide mgbanwe ihu igwe wee wepụ United States na Nkwekọrịta Paris, kwupụtara na Florida bụ "mpaghara ọdachi," ebe Houston, Texas, na-aga n'ihu n'iwepu mmiri nke Harvey site na afọ ole na ole gara aga. izu.
Anyị ga-eme ihe megide mgbanwe ihu igwe ma ghara ịrụ ụka banyere ma ọ dị ma ọ bụ na ọ nweghị, ebe ọ bụ na ihe ọ na-apụta bụ ihe a na-ahụ anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Nke a ọ bụ ihu ihu kachasị njọ nke mgbanwe ihu igwe?